पर्सामा नेपाली सेनाका २ जवानसहित ५ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
पर्सामा नेपाली सेनाका २ जवानसहित ५ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
जेष्ठ २२, २०७७ भूषण यादव
पर्सा — नेपाली सेनाका २ जवानसहित पाँच जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई बिहीवार वीरगन्जको नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।
डिस्चार्ज हुनेमा बारामा कार्यरत दुई जना नेपाली सेनाका जवान र पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका–४ निवासी २५ वर्षीय पुरुष, वीरगन्ज महानगरपालिका–५ जेलरोडका २५ वर्षीय पुरुष र वीरगन्ज–१६ का ७० वर्षीय पुरुष छन् ।
पछिल्लो दुई रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ५ जनालाई डिस्चार्ज गरिएको कोभिड अस्पतालका कोर्डिनेटर डा.उदयनारायण सिंहले जनाए । गत जेठ ११ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो ।
‘कोरोना जितेर वारामा कार्यरत नेपाली सेनाका दुई जवान र पर्साका ३ जना डिस्चार्ज भएका हुन्, डा. सिंहले भने, पछिल्लो २ रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि बिहीवार डिस्चार्ज गरिएको हो । अस्थायी कोभिड अस्पतालमा २८ जना संक्रमित रहेका छन् । पर्साबाट हालसम्म १ सय २ जना निको भएर डिस्चार्ज भएको नारायणी अस्पतालका प्रमुख डा.मदन कुमार उपाध्यायले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १३:२१
जेष्ठ २२, २०७७ विप्लव महर्जन
सल्यान — शारदा नगरपालिका–२, लुहापिङ्गको सल्यान बहुमखी क्याम्पसमा दुई दिनमा सय शय्याको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको छ । कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि उनीहरुलाई राख्ने ठाँउको अभाव भएपछि सल्यान क्याम्पस सल्यानमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको हो ।
नेपाली सेनाको समन्वयमा रातदिन गरेर दुई दिनमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले बताए । जिल्लाको अस्पतालमा २४ शय्याको मात्र आइसोलेसन कक्ष भएको र संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सुविधायुक्त आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार निर्मित आइसोलेसन कक्ष जिल्ला अस्पतालको मातहतमा रहने छ ।
‘आइसोलेसन कक्षको अभावमा बन्गाड, दार्मा, कुमाख र कपुरकोटमा देखिएका ५४ जना संक्रमितमध्ये बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका ४२ मध्ये १२ जना जिल्ला अस्पताल र १३ सुर्खेतको कारागाउँस्थित अस्पतालमा राखिएको छ । अन्य सबै क्वारेनटाइनमा नै बस्दै आएका छन् । क्वारेन्टाइनमा कोचाकोच गरी बस्दै आएकालाई सल्यान क्याम्पसको भवनमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन कक्षमा राखिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा पनि सय शय्याको आइसोलेसन बनाउने तैयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलको भनाइ छ ।
आइसोलेसन कक्ष निर्माणमा कति खर्च लाग्यो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म यकिन नभएको र सबै सामग्री उधारो ल्याएर जडान गरेको स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानका प्रमुख डा. अर्जुन बुढा मगरले बताए ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्लामा गरीएको पीसीआर परीक्षणबाट बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा ४२, दार्मामा नौ, कुमाखमा दुई र कपुरकोट गाउँपालिकामा एक जनामा कोरोसा संक्रमण पुष्टि भएका छन् । जसमध्ये अहिलेसम्म २५ जना मात्र आइसोलेसन कक्षमा बसेका उनले जानकारी गराए । डाक्टर मगरका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा २४ शय्याको मात्र आइसोलेसन भएकाले लक्षण नदेखिएका सबै संक्रमितलाई बिहीबार नै ल्याएर नयाँ आइसोलेसन कक्षमा राखिने छ । सल्यान क्याम्पसमा सय शय्याको आइसोलेसन निर्माण भएपछि धेरै राहत हुने उनको भर्ना छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमा तीन साताअघि घारतबाट आरएका दुई हजारमध्ये एक हजार ६ सयको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको र अहिलेसम्म करिब ४ सयको पीसीआर परीक्षण भएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १३:०१